Ndakamusvira Maidei – Vanoda Zvinhu
Ndakachibva ndamuti mbaa mwana apa ndakagumhisa mboro yangu pamuviri pake mwana akabva angopera simba ndokupunzikira pa mhasa paaive akawarira. Ndakachitanga kukatanura rokwe raanga akapfeka riya zvoshoma nezvishoma kwakupinza ruoko mubhurugwa make wanikwe mangova mukuvisi wega wega. Mwana ndakamumenya akasara ava bagwe kushama iniwo kwakukatanura mbatya dzangu dzose. Ndaka tanga kumutsvoda pamuromo ndochidzika kuhuro kwakumboita long stop pa mazamu awo andakayamwa kusvikira mwan ajuita kuzvongonyoka souya ane mudzimu weshato ini kwakuti dzakei kumutomatisi kwacho kwakuchidya beche ndaiita zvokuti ndikamboti rurimi rwotekenedza kabhinzi ndochinja ndoita rokutsoda ungati muromo. Mwana akachibva ati aiwa zvakwana ndokunditi dzvii mboro kwakuiti mumukanwa make ndoo. Mboro yakamwiwa nekusveteva ingati chihwitsi chezvitanda chiya apa rume ndaingoyuwira mutezo wachioma nyama dzasungana nekuterera kunakirwa.
Ndakachidzamba nedivi kwakurova beche ndaktarisa pa battle zone pacho kwakunzwa manyukunyuku pasina nguva ndakanzwa mboro yoita kuvhuta kuti vhu vhu vhu iye kwakuchimonera mmakumbo ake pamusana wangu ndokuwedzera speed paakangoti one two ini dzvooooo kutunda apa rume ndakaita zvokudzvova kunge riya bhuru remashanga ndokuti rabada kupunzikira pamusoro pake iye kwakuramba akanditsimbirira ndokuti koire koirei kwkutanga kugwina gwina ndokutunda zvakare. Tese takabva tangoti rabada kuzorora ka. Pasina nguva ndakanzwa mukova kunzi gwee kuvhurwa zvekumanikidzwa rambi kwakunzi ngwee kubakidzwa apa tiri mushwete kudaro. Maziso akamhanyira kugonhi wanikwe amai na baba vake Maidei vakamirapo vakati tuzu…………pedzisai zvakazoitika
· Last modified May 23, 2015 0
Next story Tiri Kumakwiro zvakare
Previous story Threesome, with a married woman neka19 year old